कामना सेवा विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, २६ फागुन २०७५)
कम्पनीले चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. १३ करोड ८२ लाख नाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी २२ प्रतिशत सञ्चालन मुनाफा १७ प्रतिशत र रू. २ करोड ८८ लाख खराब कर्जा संकलन गरेपछि नाफा बढ्न पुगेको हो । कम्पनीले आव २०७४ ७५ को समेत साधारणसभा गर्न बाँकी रहेको छ । कम्पनीले हालसम्म पनि साधारणसभाको कुनै सूचना दिएको छैन । कम्पनीले गतवर्ष ५ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयर र ६ दशमलव ५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । कामना सेवा बैंक र सेवा विकास बैंक साउन २० गतेदेखि मर्ज भई एकीकृत कारोबार शुरू गरेका थिए ।
कम्पनीको आगामी योजना बैंकिङ सम्भावना रहेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा २७ ओटा शाखा स्थापना गर्ने भएको छ । त्यसपछि कम्पनीको शाखा ९० पुग्नेछ । कम्पनीका शाखा काठमाडौं उपत्यकाभित्र ६ ओटाको स्वीकृत प्राप्त भई तीनओटा सञ्चालनमा आएका छन् भने बाँकी तीनओटा निर्माणको प्रक्रियामा छ । थप शाखा विस्तारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको कम्पनीद्वारा प्रकाशित वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
2019-03-10 - 65 view(s) - abhiyan